Topnepalnews.com | जापानमा कति दिन लुक्छौ गोविन्द ? करोड ठगको कहाली लाग्दो कहानी (भिडियो सहित)
Posted on: April 20, 2017 | views: 36091
जापानमा रहेका नेपालीहरुको शिर नै नुग्नेगरि नेपालबाट जापान ल्याउने भन्दै दशौं लाख ठगेर बेपत्ता भएका भनिएका गोविन्द प्रसाद तिवारीका थप कर्तुत सार्वजनिक भएका छन् ।
ठमेलमा गार्मेन्टको पसल चलाउँदै आएकी गोरखा घर भएकी अमृता ढकालबाट जापान लगिदिने भन्दै ३१ लाख ठगेर व्यापारपनि गरिदिने भन्दै सामान समेत उठाएको आरोप लागेका डा. क्रिस त्रिपाठी नाम बताउने गोविन्दको जापान ठेगाना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
उनको जापान परिचयपत्र समेत सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् ।
घर र ठेगाना ,Yokohama City Nishi-ku Sakuragicho 7-45-2 (YM Yokohama building ) room no 502
त्यसमाथि उनको कर्तुतमा साथ दिएकी जिवन संगिनि र परिवारका तस्विर समेत सार्वजनिक हुँदा उनीसँग असम्वन्धित व्यक्तिहरु समेत बदनाम हुने भय बढ्न गएको छ ।
जापानमा गार्मेन्टको सामान राम्रो मूल्यमा बेचिदिने भन्दै १४ बोरा सामान समेत झ्वाम पारेका गोविन्दले सामान मात्र पारेनछन् अन्य आधा दर्जन व्यक्तिको जिवनका सपना समेत डुबाइदिएका रहेछन् ।
तिवारीले ठमेलमै व्यवसाय गर्दै आएका जिवन पाण्डेबाट करिव १० लाख ठगेपनि दबाव दिएपछि केही फीर्ता गरेपनि ४ लाख ५० हजार ठगेर बेपत्ता भएको पाण्डेले बताएका छन् ।
यस्तै गोरखाका देवि प्रसाद ढकाललाई जापानमा काममा लगाइदिने भन्दै सपना देखाएर करिव २ बर्ष अघि ६ लाख २५ हजार ठगेका गोविन्दले गोरखाकै रविन दाहालको ५ लाख समेत लुट्न भ्याएका रहेछन् ।
तिम्रो नाम कन्फर्म भइसक्यो, उड्न ठिक पर भन्दै उल्टै हाम्रो इज्जत हुन्न भन्दै मागे रविनले भने अनि विश्वास लागेर पैसा दिएको यस्तो भयो ।
गोविन्दको ठगीको कथा यतिमा मात्र सिमित छैन । उनले झापाका सुमी राईलाई अहिले घर न घाटको हुनेगरि २५ लाख ठगेका रहेछन् ।
गोविन्दले श्रीमान् श्रीमतीलाई नै जापान लैजाने भनि ठगेको राईले बताएकी छिन् । राईले आफु ठगिएपछि पसल थापेको पनि बेच्नु परेको र ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेको गुनासो गरिन् ।
अमृता ढकालले त्रिपाठीले ठगेको भनि उनि विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेपछि प्रहरी, सिविआई र ईन्टरपालले त्रिपाठी लाई खोजिरहेको छ ।
त्रिपाठी अहिले पनि जापानको योकोहामामा रहेको उनको गेठाना सार्वजनिक भएको छ ।
त्रिपाठीले किशोर शर्मा, सञ्जय सापकोटा, पुरुसोतम आचार्य लगायत अन्य व्यक्तिसँग पनि लाखौं रुपैयाँ ठगेको विवरणहरु प्राप्त भएका छन् । तर ठग भनि नेपाल प्रहरीले मोष्ट वाण्टेड सुचिमा राखेका त्रिपाठी भने अझै जापानमै छन् ।
करिव दुई साता अघि मात्र नेपाल गएर आएको बुझिएका त्रिपाठीबारे जापानमा रहेका नेपालीहरुले तथानाम गाली गर्दै उनका तस्विरहरु राखिरहेका छन् । जुन समाचार क्रमश जापानी नागरिक हुँदै मिडियासम्म पुग्ने देखिएको छ ।
नेपालीहरुलाई ठगेर बिचल्ली बनाएर जापानमा आरामको जिन्दगी जिइरहेका भनिएका त्रिपाठीलाई नेपाल फिर्ता गराएर कारवाही गराउन नेपाली राजदूतावास जापानले कस्तो पहल गरिरहेको छ केही खुलेको छैन । तर सामाजिक सञ्जालहरुमा भने दूतावासले केही पहल नगरेको ठगहरुलाई कारवाही गराउन भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
यस्तै नेपालीहरुको हक हितको लागि भन्दै खुलेका संघसंस्थाहरुले समेत नेपालीहरु लुटिएको प्रमाण सहितका खवर बाहिर आउँदा समेत त्यस्ता व्यक्ति पत्ता लगाएर कारवाहीको लागि सहयोग र पहल नगरेको गुनासो र आरोप लाग्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जापानमा रहेका नेपाली मिडिया सहित सबै समुदायले जिम्मेवार निकाय र सरोकारवाला संघसंस्थाहरुलाई नेपालीलाई ठगेर जापानमा सम्मानीत जस्तो देखिने सुखसयलको जिन्दगी बिताइरहेका गोविन्द त्रिपाठीलाई कारवाही गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले आगामी दिनमा जापानमा ठगेमात्र होइन नेपालीहरुलाई ठगेर जहाँ गएर लुगेपनि यस्ता व्यक्ति र प्रवृत्ति भएकाहरु कारवाहीमा परेरै छाड्छन् भन्ने उदाहरण बन्ने छ ।
फोटोहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट साभार गरिएका हुन् ।